ARTISTA AO FENOARIVO-ATSINANANA : Nanatanteraka fifampiarahabana tratry ny taona
Nahatsiaro ho manana mpiahy amin’izao fotoana izao ireo mpanakanto ao Fenoarivo-Atsinanana amin’ny alalan’ny Minisiteran’ny serasera sy kolontsaina. 13 janvier 2020
Ny zoma 10 janoary lasa teo, nisy ny fihaonana sy fifampiarahabana tratry ny taona vaovao 2020 ho an’ireo mpanakanto nokarakarain’ny talem-paritry ny serasera sy kolontsaina Analanjiro Ndiamahazo Mickaelys ary ny talen’ny tranoben’ny kolontsaina ao Fenoarivo-Atsinanana, Andrianoelison Henri.
Nambaran’ireo mpanakanto tao Fenoarivo-Atsinanana fa sambany no mba nisy fihaonana nahavory artista maro tahaka izao. Nisy ny fifakalalozan-kevitra momba ny ho fanatsarana ny firaisankina. Samy resy lahatra ny rehetra fa ilaina ny fisian’ny fikambanan’ny artista ahafahana manamora ny fampivondronana sy mba hisian’ny tena sehatra fifanampiana.
Anisany tonga niatrika izao fihaonana sy fifampiarahabana tratry ny taona ho an’ny mpanakanto tao Fenoarivo-Atsinanana izao ireo artista kalaza ao anatin’ny faritra Analanjirofo toy an-dry Lien Bouessa, Kapepeky, Michel Patrick tompon’ilay hira « Lelahy Manambola », izay nindramin’i Big Mj amin’izao fotoana izao. Amin’ny maha sady fety azy dia nofaranana tamin’ny fiaraha-mikorana ny fotoana.